Warbixin: Allow yaa Madaxda Itoobiya indhaha siyaasadeed u fiiqa | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Warbixin: Allow yaa Madaxda Itoobiya indhaha siyaasadeed u fiiqa
Warbixin: Allow yaa Madaxda Itoobiya indhaha siyaasadeed u fiiqa
Itoobia iyo soomaaliya muddo dheer ayaa cadaawadu dhextiil. Mar-kasta waxaa furneyd fursad lagu heshiin karey, laakiin mar-kasta madaxda labada dal ayaa ka ildhuufi jirtay fursaddaas.
Itoobiyana waxay is-mahadisay markii saaxiibadeed intay dawladii Soomaaliya oo indhaha kululeed jilbaha dhulka ugu dhufteen oo cadowgeede u sakaar-wareen (u jabsheen) ay dawladda Itoobiya ugu deeqeen in ay iska fagato.
Waxaad moodda in Itoobiya go’aansatay talada ah (Soomaaliya kuftaye ayna kicin)
SIDA XAALKU AHAA KA HOR 8DII BISHA LABAAD 20017.WALINA YAHAY.
Waxaa dalka Soomaaliyeed u ekaa mid ay Itoobiya gumeysato, taasuna waxay ahayd mid xaqiiqa ah.
Waxaa Itoobiya dalka ku haysey fara-galin ba’an oo ah, xagga ciidanka, xagga Siyaasadda, xagga wardoonka iyo dabcan xagga bulsada.
Waxaa dalka jooga Ciidama badan oo cid tirsigooda taqaan iyo cid ku dhacda inay tirsgooda ogaato midna jirin. Meeshay rabaan ayey u guuraan, meeshay tagaanna ayagaa xukuma,
Lixda gobol ee lugooyada Soomaaliya loo sameeyey Madaxdoodu waxay ahaayeen walina yihin kuwo ka diiwaan gashan Addis. U yeeriddodana ma jirin cid looga haybeysan jiray.
Madaxda Fedaraalka waxaa lagu xaman jirey in ay xiir xad-dhaaf ah oo an miisaanneyn la leeyin Itoobia. waxaa jiray Dibolomaasiyiin aan uqalmin in ay maalin qura dalka joogaan (persone in grado) oo ku abaaday dalka kuna taajiray laaluushka ay kala dabarayeen.
Tiro badan oo ka mid ah Golayaasha shacabka ayaa farta lagu fiiqayaa.
Dadkaas waxaa lagu sheegayaa jaajuusiin lakiin qofkii siyaasadda ka jaajuusa waa kha’nu waddan ee maaha jaajuus.
Ma jirin qof darajo haweysan karaa, haddaan Itoobiya raalli ka ahayn.
Iskadaa waxle ee Dawladda Itoobiya waxay ka xishoon weydey in ay Safasaraddeeda ka dhex rarto Madaxtooda Soomaaliya, dawladda Soomaaliduna waa ku dhici weydey in ay ka gil-gilato arrintaas.
Xaaladda jirtay, walina jirta waxaan u sawiri karaa sidaan:- ( Madaxda Itoobiya waxay u ekayd libaax rati gool ah baqtiistay oo intuu barkaday farxad la dhoolla caddeeyey.
Madaxda Soomaaliduna waxay u ekeyd Dibi caato la habsadey oo wadda cidla ah jiriqsanaya isaga oo axgabay).
Tan laadna waa doorashadii ugu farxadda badnayd ugu naxdinta badnayd M/W. M. C. Farmaajo.
Tanu waa guul bilow ah ee maaha wixi Soomaaliya u baahnayd oo dhan.
MAXAA DAWLADA ITOOPIA LAGA FIN KARAA?
Itoobiya waa in ay gabi ahaanba baddashaa siyaasadeeda Somaaliya ku wajahan.
Ma jirto sabaab Itoobia ku xambaari karta cadowtooyada Soomaaliya.
Markii laga tago fara-galinta micna la’aanta ah, Itoobiya waxay Soomaliya kadanayn karta laba qodob ee kala ah:-
1: Sheegashada Soomali galbeed iyo badaha haawanaya oo Itoobiyo baahi weyn u qabto, labadaba si nastahan ayaa lagu dhammayn karaa.
Tan hore arrinta Soomaali galbeed Somaaliya uma taal.
Dadka degan oo qaardood Itoobiya daacad u yihiin halka qaaar kalena madax bannani doonayaan ayey u taal.
Labada qolo midkoodna Soomaali wakiil uma aha mana sheeganayaan in ay Soomali doonayaan, markaas ma muuqato sabab Soomali looga baqo. Midda labaad waa badaha haawanaya ee reer galbeedku sunta ku daadinayo, ma muuqato sabab Itoobiya uga qatanaato, Soomaaliyana waa u dan in baddooda la isticmaalo oo waxay ka helayaan canshuur iyo shaqo iyo waliba dal dhisid waa hadii madax banaanida Soomaaliya la ciseynayo.
Markuu taas hanto, isga oo guuleysan, dalka Soomaaliya booqasho ha ku yimaado.
Imaatinkiisaas kaliya ayaa (micne siyaasadeed dhalinaya). Ogow haddii M.W Soomaaliya ama PM Soomaalia Addis. looga yeero, xiiso weyn dhalin mayso, waxayna noqonaysaa sidii booqashooyinkii madaxda Soomaaliyeed Addis Ababa ku tigi jireen oo kale.
Aragtida faaladan kama turjumayso siyaasadda Xaqiiqa Times
Qoraa Khalif Ashkir Diinixoosh.
Previous articleThe restoration of the ancient mosque of Al-Nejashi in Ethiopia is nearing completion
Next articleMogadishu declaration on regional cooperation on the current drought